Tubing uye Flexible Hoses
Sample Cylinders uye Condensate Pots
Zvishandiso uye Zvishandiso
Kambani iyi yakura kuita mubatanidzwa wepasi rose unogadzira, unovandudza, uye unogadzira zviuru zvezvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemasevhisi. Chikwata chehunyanzvi chakaunganidza hupfumi hweruzivo mumaindasitiri akaita sekugadzira magetsi, petrochemical, gasi rechisikigo uye semiconductor Indasitiri.
Zvese zvigadzirwa zveCIR-LOK zviri pasi pekuomesera kwemhando yekusimbisa manejimendi maitiro kuburikidza nematanho ese ekugadzirisa odha, dhizaini, kugadzira, kuyedza uye chitupa kuti ive nechokwadi chekuti izvi zvakakosha zvinodiwa nevatengi zvinosangana.
PaCIR-LOK, tinovavarira kugutsikana zvachose kwevatengi vedu. Mibvunzo yako ichapindurwa mukati memaawa makumi maviri nemana. Chikwata chedu chine vashandi vane ruzivo kuti vapindure mibvunzo yako nekukurumidza. Kukurumidza kuburitsa ndiyo kiyi yekubudirira kwako.
Chinangwa cheCIR-LOK chine hukasha ndechekuzvisimbisa semutungamiri weindasitiri uye kuwedzera chikamu chedu chemusika. Izvi zvinochengetwa mudhipatimendi rega rega mukati mesangano. Kuedza kwedu kwakazara kunodzivirira kurasikirwa nekubata wega kunoita kuti bhizinesi redu rifadze uye ribudirire kune vese vanobatanidzwa.
Proportional Relief Mavharuvhu
Yakaderera Kudzvinyirira Mavharuvhu, Fittings uye Tubing
Ultra High Pressure Valves, Fittings uye Tubing
Medium Pressure Valves, Fittings uye Tubing